किन चुरोटको धुँवाभन्दा अगरबत्तीको धुवाँ बढी खतरनाक हुन्छ ? यस्तो छ कारण - Everest Dainik - News from Nepal
किन चुरोटको धुँवाभन्दा अगरबत्तीको धुवाँ बढी खतरनाक हुन्छ ? यस्तो छ कारण
हाम्रो धर्म र संस्कारमा अगरबत्तीको प्रयोग उल्लेखनीय रुपमा गरिन्छ । अगरबत्ती हजारौं वर्षदेखि प्रयोग गरिँदै आइएको छ । विशेष पूजाआजामा मात्र होइन, बिहान र बेलुका नियमितरुपमा अगरबत्ती सल्काउने अधिकांशको घरमा चलन नै हुन्छ ।
तर, भर्खरै भएको एक नयाँ अनुसन्धानले अगरबत्तीको धुँवा, चुरोटको धुँवाभन्दा खतरनाक हुने तथ्य पत्ता लगाएको छ । साउथ चीन युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा भएको एउटा नयाँ शोधका अनुसार अगरबत्तीको धुँवा पनि चुरोटको धुँवाभन्दा अगरबत्तीको धुँवा अझ खतरनाक हुने पत्ता खबरले मानिसहरु अचम्भित भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पुरुषहरुले यौनसम्पर्क गर्नुअघि यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
‘अगरबत्तीको धुप बाल्दा निस्कने धुँवाले ब्रेन ट्यूमर र क्यान्सर हुने खतरा बढ्द छ,’ शोधको निष्कर्षमा भनिएको छ । शोधकर्ताहरुले अगरबत्तीको धुपमा प्रयोग गरिने केमिकल डिएनएमा परिवर्तन हुन्छ र यस्तो धुँवाबाट शरीरमा जलन हुने र क्यान्सरसम्म हुन सक्ने बताएका छन् ।
ब्रिटिश लङ्ग फाउन्डेसनका चिकित्सकीय सल्लाहकार डाक्टर निक रोबिन्सनले अध्ययनमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘धुपसहित कैयौं प्रकारका अगरबत्तीको धुँवा विषालु हुनसक्छ ।’यद्यपि, यो अध्ययन सानो परिणाममाथि गरिएको थियो । ४ वटा अगरबत्ती र एक चुरोटमा गरिएको तुलनात्मक अध्ययनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएकोले यसलाई सहजै सामान्यीकरण भने गर्न सकिँदैन । एजेन्सी